Fact Check Archives - Kachin News Group (KNG) ,
YouTube တွင် ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် စာဖတ်ပရိတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည့် ‘ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့ ၁၀ နာရီတိတိမှာ အာဏာပြန်အပ်လိုက်ပြီ’ ဆိုသော သတင်းအမှား YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခု ယနေ့ ထပ်မံ ပြန့်နှံနေပါသည်။ ပရိသတ် ၉ သောင်းနီးပါး (Subscriber 87.4 K) ရှိသော “အရေးတော်ပုံ ayaytawbon” Youtube Channel တွင် ၉ မိနစ်၊ ၆ စက္ကန့်ရှိသော ဗီဒီယိုတစ်ခုကို
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တောင်ဘက် ဥကရစ်ထ တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားသော PDF တော်လှန်ရေးရဲဘော် ၁၁၅ ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရ ရဲဘော် ၂၇၄ ဦးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ KNU အဖွဲ့အား ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁ သန်း ထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟူသော ထုတ်ပြန်ချက်အတု ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် Telegram တွင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူများကို ဖြန့်ဝေနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်အတုကို Kyaw Swar
စစ်ကောင်စီတပ်၏ ဥကရစ်ထစခန်းတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားသည့် တော်လှန်ရေးရဲဘော် (၁၅) ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရရှိ ရဲဘော် (၃၅) ဦးအတွက် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ၃၀၀၀၀ ကျပ်ထောက်ပဲ့ရန် အမျိုးသားညီ ညွတ်ရေး အစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညွန်ကြားထားသည်ဆိုသည့် ကြေငြာချက်အတု လူမှုစာမျက်နှာပေါ်တွင် ပျံ့ နှံ့နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်အတုကို ‘သူရအောင်’ ဆိုသူက ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့ပြီး ‘PDF. တကောင်
မဲရုံကိစ္စဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများပတ်သက်သည့် သတင်းအမှား
၂၀၂၀ ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ NLD ၏ ပြိုင်ဘက်ပါတီအချို့ မဲရုံကိစ္စဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်းသွားမည်မဟုတ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးက ပြောကြားလိုက်သည်ဟု လူမှုကွန်ယက်ပေါ်များတွင် ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်ခန့်တွင် Tone Tone အမည်ရှိ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်ပေါ်မှာ ‘မဲရုံကိစ္စများဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရသည့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန် အစီအစဉ်မရှိဟု
KIA ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ်၏လူသတ်မှုကို ညီဖြစ်သူ NLD ကချင်အမတ်က ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သည်ဆိုသော သတင်းမှား
KIA ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် လူသတ်မှုကိစ္စကို သူ၏ညီဖြစ်သူ ရွေးကောက်ခံကချင် NLD အမတ်တစ်ဦးက ကြားဝင်ညှိနှိုင်းကာ နစ်နာကြေးပေးခဲ့သည်ဆိုသော ရေးသားမှုမှာ သတင်းအမှားဖြစ်သည်ဟု မေးမြန်းသိရှိရသည်။ (more…)
ရှမ်းပြည်နယ် လီဆူရေးရာဝန်ကြီးနေရာတွင် ဒူးလေးပါတီကအနိုင်ရသည်ဆိုသော သတင်းမှား
ရှမ်းပြည်နယ် လီဆူရေးရာဝန်ကြီးနေရာတွင် ဒူးလေးပါတီက အနိုင်ရသည်ဟူသောသတင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲအဆုံးရလဒ် မထွက်ခင်ကာလ ရေးသားဖော်ပြမှုများသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် NLD က အနိုင်ရသောကြောင့် ယခင်က ရေးသားဖော်ပြမှုများမှာ သတင်းမှားဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ လီဆူအမျိုးသားဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ LNDP (ဒူးလေးပါတီ) ဥက္ကဌ ဦးရွှေမင်း၏အကောင့်နှင့် Lisu Social Media လီဆူလူမှုမီဒီယာ page တို့တွင် ဒူးလေးပါတီက ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရေးရာဝန်ကြီးတစ်နေရာ၊ ပြည်နယ်အမတ် ၁ နေရာနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရေးရာဝန်ကြီးတစ်နေရာစသဖြင့် ၃
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ကြား ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson က ကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် မကြာခင် Bilateral အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တော့မည်ဟူသောသတင်းသည် သတင်းမှားဖြစ်သည်ဟု သက်ဆိုင်သူများပြောသည်။ (more…)
KSPP ပါတီက Kareng Bawm Awn ကို တရားစွဲဆိုထားသည်ဆိုသည့် သတင်းအမှား
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် Kachin State People’s Party – KSPP ပါတီမှ ဒေါ်ဒွဲဘူ က စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သော Kareng Bawm Awn ကို အသေရေဖျက်မှု ပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်ဟု ‘Mirror Kachin’ အမည်ရှိ Facebook Account တစ်ခုတွင်ရေးသားဖြန့်ဝေနေမှုမှာ သတင်းအမှားသာဖြစ်သည်ဟု သက်ဆိုင်သူများက ပြောသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဦး Kareng Bawm Awn